Magaalaan Boston Muddama Jala Jirti
Ebla 19, 2013
Shakkamtoota haleellaa Boombii Boston
WASHINGTON DC — Angawoonni Federaalaa Ameericaa har’a suraa fi video shakkamtoota haleellaa Boston raawwatan jedhanii ifa taasisaniiru. Shakkamaan inni duraa kofiyyaa gurraachaa keeyyatee jira, inni lammataa immoo kofiyaa adii gara boodaatti gara galchee keeyyatee jiru agarsiisan.
Angawoonni akka jehdantti shakkamaan koofiyaa adii keeyyatuu kan haleellaa boobmii sanaan shakkamuuf shakkamaa lammataa amma iyyuu hin qabamin jira, meeshaa hidhatee waan jiruuf sodaachisaa dha jedhan.
Qorattonni namoonni lamaan konkolaataa tokko hatanii waaltaa Technology Massachusetts kan bakka Watertown jiruu utuu hin baqatin dura angawaa police waaltaa sanaa tokkotti dhukaasuun ajjeesan. Yeroo sana ergaa poolisiin walitti dhukaasuun sun vidiyoo ogeessotaan hin ta’in ykn vidiyoo amateriin kan waraabame.
Poolisiin yeroo faana dha’aa turetti shakkamtoonni sun konkolaataa isaanii keessaa dhuka’aa darbaa turan. Shakkamaan inni tokko suraa FBIn ka’e irraa akka argametti koofiyyaa gurraacha kaayyatee kan ture si’a ta’u dhukaasa poolsiin walitti banameen madaa’ee hospitaala Beth Israel-tti erga geessamee booda achitti du’uu agawoonni ibsanii jiran.
Dr. David Shoenfeld Hospitaala sana keesaa doktota yoo ta’an jiraataa bakka dhukaasi poolisii fi shakkamtoota gidduutti itti geggeessame bakka Watertown jiraatu. Dhukaasa sana dhaga’een jira jedhu.
Anawoonni Hospitaalaa akka jedhanitti shakkamaan madaa’e sun yeroo hospitaala ga’u onneen isaa dadhabee ture, bakka hedduu rasaasaan rukutamee jira. Madaa hamaa kan dhuka’aan dha’ames qaama isaa irratti ni mul’ata ture.
Jimaata har’aa ganama barii dubbi himaan Police kutaa Massachusetts Timothy Alden haala isaa ibsanii turan.
Naannoo shakkamaan lammataa tarii keessa dahatee jira jedhame bakka Watertown jedhamu marsuu dhaan Poolisiin barbaacha isaa itti fufee jira.
Eessummni shakkamtoota kanaa Mr. Gasrniin tuuta oduuf ibsa kennaniin ijoolleen obboleessa koo tii waan sukaneessaa akkasii raawwachuu isaanii hedduu nu qaanesse jedhan. shakkamaan hanga yoonaa hin qabamin jiru mucaan obboleessa isaanii lubbuun jira taanaan harka akka kennu maatii namooni duraa miidhamanis dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsanii firoottan namoota du’anii fi madaa’anii argee maatii koo bakka bu’ee jilbeenfadhee dhiifama gaafachuun fedha jedhan.
Shakkamtoonni kun kan obbolaa yoo ta’an umruiin waggaa 19- Dzhokhar Tsarnaev fi kan umuriin waggaa 26-Tamerlan Tsarnaev lammiiwwan chechenya ti.
Haleellaa Boston Ilaalchisuun gabaasa qindaa'e dhaga'aa